Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်)
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zestoretic ဆေးဟာ lisinopril နဲ့ hydrochlorothiazide ပါဝင်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ linsopril ဟာတော့ angiotensin converting enzyme ကိုပိတ်ပေးပြီး သွေးကြောများကို ပြေလျော့စေခြင်းဖြင့် သွေးကူလွယ်ကူစွာစီးဆင်းစေပါတယ်။
Hydrochlorothiazide ကတော့ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေတွေဆားတွေအရမ်းများပြီး အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အခါ ဆီးများများသွားစေသော ဆီးဆေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Zestoretic ကို သွေးပေါင်တက်၍ဆေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ထိန်း၍မနိုင်တော့သည့်အခါ အသုံးပြုပါသည် ။
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
– ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးပမာဏနှင့် ဆေးသောက်ရန် အစီအစဉ်အတိုင်းဆေးကိုသောက်သုံးရပါမယ် ။
– ဆေးမသောက်ခင် ဆေးညွှန်းကိုသေချာဖတ်ရပါမယ် ။
– ဆေးညွှန်ကို သေချာနားမလည်လျှင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းရပါမယ် ။
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zestoreticဆေးကို အလင်းရောင်နှင့် စိုစွတ်မှုများကင်းဝေးသော အခန်းအပူချိန်မှာထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ဆေးတွေကိုမပျက်ဆီးစေရန် ရေချိုးခန်း နှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးရှောင်ကျဉ်ရပါမည်။ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
– zestoretic ပါဝင်သောပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း။
– ဆေးဝါးများ ၊ဆိုးဆေးများ ၊အစားအစာများ ၊တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ။
– zestoreticနှင့်ဓာတ်မတည့်သောဆေးများသုံးစွဲနေလျှင် သို့ ဓာတ်မတည့်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိလျှင်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၊နို့တိုက်စဉ်မှာဆေးသုံးစွဲခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းမကင်း သေသေချာချာ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။zestoretic ဆေးသုံးစွဲခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို သေချာသိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ဗချာတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ zestoretic သုံးစွဲခြင်းဟာ US Food and Drug Administration (FDA) အရ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့် C ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အဆင့်တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်….
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Zestoretic ဆေးဟာလည်ယ အခြားဆေးတွေလိုပဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။အများစုကတော့ ဖြစ်ခဲပြီးတော့ ထပ်ပြီးကုသမှုတွေခံယူစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးသုံးစွဲပြီးတဲ့အခါ ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
– သတိလွတ်သွားသလိုခံစားရခြင်း ၊ မျက်လုံးများနာကျင်ခြင်း ၊ အမြင်အာရုံပြဿနာများ ၊ ပိုတက်စီယမ်များခြင်း(နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးခြင်း ၊ သွေးခုန်နှုန်းနည်းခြင်း ၊ ကြွက်သားများချိနဲ့ခြင်း ၊ စူးစူးရှရှခံစားရခြင်း) ၊ ပိုတက်စီယမ်နည်းခြင်း( စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း ၊ ရေငတ်ခြင်း ၊ ဆီးများစွာသွားခြင်း ၊ ခြေထောက်များမသက်မသာဖြစ်ခြင်း ၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း) ၊ ပါးစပ်များခြောက်ခြင်း ၊ ပျို့အန်ချင်ခြင်း ၊ အားနည်းခြင်း ၊ ရီဝေဝေဖြစ်ခြင်း ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်များပေါ်ခြင်း ၊ အရေပြားများနီမြန်း၍ကွာကျခြင်း ၊ အရေပြားနှင့် မျက်လုံးများဝါခြင်း ၊ ဆီးသွားနည်းခြင်း သို့ လုံးဝမသွားခြင်း ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ၊ အလေးချိန်တက်လာခြင်း ၊ အသက်ရှူစိတ်လာခြင်း ၊ တုတ်ကွေးလက္ခဏာများ ( ဖျားခြင်း ၊ ချမ်းတုန်ခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း) ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း ၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊အစာအိမ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်ဆေးတွေက Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zestoretic ဟာသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဓာတ်ပြုပြီး ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံတွေပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆေးအချင်းချင်းမတည့်တာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးတွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားပြီးဆရာဝန်ကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများစတင်သုံးစွဲခြင်း ၊ရပ်တန့်ခြင်း သို့ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ zestoretic နဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့..
Digoxin, dofetilide, or ketanserin
Eplerenone, potassium preparations, potassium-sparing diuretics (e.g., triamterene)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (e.g., celecoxib, ibuprofen, indomethacin)
Diazoxide, diuretics (e.g., furosemide)
Aliskiren or angiotensin receptor blockers (arbs) (e.g., losartan)
Certain gold-containing medicines (e.g., sodium aurothiomalate)
Cholestyramine, colestipol, or salicylates (e.g., aspirin)
Lithium or thiopurines (e.g., azathioprine)
Insulin or other diabetes medicines (e.g., glyburide) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Zestoreticဟာ အစားအစာတွေ အရက်တွေနဲ့ဓာတ်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးမသုံးစွဲမီ ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zestoretic ဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သက်ရောက်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံ သို့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ထိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကတော့..
– မျက်နှာ ၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာ ၊လည်ပင်း ၊ လက်များ သို့ ခြေထောက်များ ဖောရောင်ခြင်း ၊
– ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း ၊
– ဆီးချို သွေးချိုရှိခြင်း ၊
– မွေးရာပါဖောရောင်ခြင်းများရှိခြင်း ၊
– ကျောက်ကပ်ပြသနာများရှိခြင်း ၊
– ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိခြင်း ၊
– သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ ၊
– သွေးထဲတွင် မက်ဂနီစီယမ် ၊ပိုတက်စီယမ် ၊ဆိုဒီယမ်များနည်းနေခြင်း ၊
– ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း ၊ အန်ခြင်း သို့ ဝမ်းသွားခြင်း ၊
– ရေတိမ်ရှိခြင်း ၊
– ဂေါက်ရောဂါရှိခြင်း ၊
-နှလုံး သို့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ၊
– ကယ်စီယမ်များခြင်း ၊
– ကိုလက်စ်ထရော များခြင်း ၊
– အသည်းရောဂါများ ၊
– အမြင်အာရုံပြဿနာမျး ၊
– autoimmune ရောဂါ…တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစပိုင်းတွင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁ လုံးဖြစ်ပါတယ် ။
သက်သာမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ပမာဏကတော့ တစ်ခါသောက်လျှင် အများဆုံး၂လုံး တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးတွေအတွက် Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးများသောက်သုံးရန်ပမာဏကိုတော့ဖော်ပြမထားဘူး။ဆေးသုံးစွဲခြင်းဟာ ကလေးကိုအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးမသုံးစွဲခင်မှာဆေးရဲ့စိတ်ချရမှုကို သေသေချာချာသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ။
Zestoretic (ဇက်စ်တိုရီတစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Zestoretic ဆေးကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးပမာဏနဲ့ပုံစံအတိုင်းရနိုင်ပါတယ် ။
linsinopril 10 mg နှင့် hydrochlorothiazide 12.5 mg
– linsinopril 20mg နှင့် hydrochlorothiazide 12.5 mg
– linsinopril 20 mg နှင့် hydrochlorothiazide 25 mg
အကယ်၍ဆေးသောက်ရန်မေ့လျော့ခဲ့ပါက သတိရရခြင်းသောက်သင့်ပါတယ်။ သတိရတဲ့အချိန်ဟာ နောက်တကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သောက်သင့်ပါတယ်။ ၂ ဆသောက်ခြင်းမျိုးတော့မပြုလုပ်ရပါဘူး။
Zestoretic® (Hydrochlorothiazide/Lisinopril). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lisinopril-and-hydrochlorothiazide-oral-route/description/drg-20069073. Accessed November 14, 2016.
Zestoretic® (Hydrochlorothiazide/Lisinopril). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-2622/lisinopril-hydrochlorothiazide-oral/details. Accessed November 14, 2016.
Zestoretic® (Hydrochlorothiazide/Lisinopril). https://www.drugs.com/pro/Zestoretic.html. Accessed November 14, 2016.
ကျန်းမာရေးစင်တာ (EN), ကျန်းမာရေးအားလုံး
Blood pressure မဟုတ်တဲ့ Pulse pressure အကြောင်း ။ ။
သွေးပေါင်ချိန်စက်ကဖော်ပြနေတဲ့ နံပါတ်တွေ ပြောပြတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း ။ ။
Wide pulse pressure ( အပေါ်သွေးပေါင်ချိန် အောက်သွေးပေါင်ချိန်ခြားနားမှုများနေခြင်း)